बाग्लुगंका यी जोडी, युवराज र पुष्पाको अचम्मको बिहे (भिडियो सहित)
September 26, 2020 1001
बाग्लुगं बुर्तिबागंका युव राज कँडेल र पुष्पा कँडेलको जोडी’लाईं सहयोग प्राप्त भएको छ । यो संघर्षशिल जोडी’लाई अमेरिका’बाट आएको सहयोग लिएर संचार’कर्मी मोहन बस्नेत फेरी बाग्लुगं पुगेका छन् । विभिन्न ब्यक्तिबाट प्राप्त १२ ह’जार रुपैयाँ दिन मोहन बाग्लुगं पुग्दा युवराज र पुष्पाको जीवनका रोचक तथइ बाहिर आ’एका छन् ।
दुवै खुट्टा चल्न न’सक्ने अवस्था’का युवराज र एउटा हात नभएकी पुष्पाका २ छोरा र एक छोरी छन् । उनीहरुका एक छोरा सामान्य भए पनि कान्छा छो’रा र छोरीमा भने समस्या दोहोरि’हिहने उनीह’रुले बताए ।
छोरीको बेला बेलामा कान नसुन्ने स’मस्य छ भने कान्छा छोराको खुट्टा ८ पटक भाँच्चिएको युवरा:जले बताए । युवराजका अनुसार यो जोडीले कृषीको काम गरेर जि’विको पार्जन गर्दै आएका छन् । कुरा’कानीका क्रममा यो जोडीले आफ्नो विबा’हको रोचक कि’स्सा पनि सुनाए । शारिरीक रुपमा अति कम:जोर युवराज हात खुट्टा टेके’र हिँड्ने गर्छन् ।
विबा’हको कुरा चले:पछि बेहुली’लाई लिन जा’ने दिन रातीको विबाह गर्ने क्रममा जन्तीलाई कुरेका बेहुला एकछिन सुत्छु भनेपछि भुुसुक्कै निदाएछन् । जन्तीले बेहुली’लाई लिएर आएपछि एक्कासी उठेका युव’राजले पुष्पालाई आफ्नै घरमा ल्याएर विबा:ह गरेका हुन् ।
हेर्नुहोस् यो जोडीको संघर्षको रोचक कथा भिडियोमा…
Prevपर’पुरुषसँग सम्बन्धको शंका गर्दै श्रीमानले काटि’दिए आफ्नै श्रीमतीको नाक….
Nextबेरोजगार श्रीमतीले मेरो कमाई भन्दै श्रीमानलाई दिईन् १० करोड, श्रीमतीको काम थाहा पाउँदा चकित !
ग्रह/राशि अनुसार भोलि मंसिर ६ गते शनिबारको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुहोस् तपाईंको राशिफल